भर्खरै तीनकुनेबाट आयो यस्तो दुःखद खबर… – PathivaraOnline
Home > समाचार > भर्खरै तीनकुनेबाट आयो यस्तो दुःखद खबर…
admin November 1, 2020 November 1, 2020 समाचार 0
काठमाडौंको तिनकुनेमा एक पुरुषको शव फेला परेको छ । बानेश्वर प्रहरी बृत्तभन्दा अगाडि रहेको बागमती खोलाको पुलमुनि आइतबार दिउँसो साढे दुई बजे अन्दाजी ३५ वर्षीय पुरुषको शव फेला परेको काठमाडौं प्रहरी परिसरले जानकारी दिएको छ ।
शव पानीमा डुबिरहेको अवस्थामा फेला परेको थियो। तर शरीरमा घाउचोट भने केही नदेखिएको जनाइएको छ । शवको कसको हो भन्ने पहिचान हुन सकेको छैन । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
धरौटी नलिइ उपचार गर्न अस्पताललाई निर्देशन
काठमाडौं-सरकारले सरकारी अस्पतालहरुलाई धरौटी शुल्क नलिइ उपचार गर्न निर्देशन दिएको छ । सरकारी निर्देशन अनुसार भन्दै विभिन्न सरकरी अस्पतालले सूचना नै प्रकाशन गरी धरौटी रकम माग गरेपछि सरकारले यस्तो निर्देशन दिएको हो । उपत्यका तथा उपत्यका बाहिर रहेका सबै सरकारी अस्पतालहरुले कोरोनाको उपचार गर्न धरौटी रकम राख्नुपर्ने भन्दै सूचना प्रकाशन गरेका थिए ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार धरौटीका लागि सूचना प्रकाशन गर्ने अस्पतालहरुलाई स्पष्टिकरण समेत सोधिएको छ । सरकारले आफै उपचार गराउन सक्नेसँग शुल्क लिन नसक्नेको निःशुल्क उपचार गर्न निर्देशन दिएको पनि उनले बताए ।
०७७ कार्तिक १७ गते, इ.स. २०२० नोभेम्बर ०२ तारिख सोमबार, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य!
राजधानीमा लकडाउनै छदै यसरी सवारी चाप बढेपछि तिनै जिल्लामा अब यस्तो गरिने
राउटे युवती माथि पहिले पनि भएको रहेछ यस्तो घ’ट’ना…